Haati miliyoonotaa Doktarri Kabajaa Abbabach Goobanaa (1938-2013) boqotan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHaati miliyoonotaa Doktarri Kabajaa Abbabach Goobanaa (1938-2013) boqotan
Haati miliyoonotaa Doktarri Kabajaa Abbabach Goobanaa (1938-2013) boqotan
Hojii tola ooltummaatiin daran beekaman Doktarri Kabajaa Abbabach Goobanaa guyyoota 15 dura qabamanii Hospitaala Phaawuloositti kutaa namoonni dhukkubni itticimetti wal’aansi taasifamaafii turee halkan edaa addunyaa kanarraa du’aan boqotan. Salaale goota qofa miti, haadhas biqilchiteetti. Haadha ijoollee miliyoonotaa kan ta’an Doktarri Kabajaa Abbabach Goobanaa, bara 1938 Shawaa Kaabaa, Salaalee bakka Shabal jedhamutti abbaasaanii Obbo Goobanaa Heeyyiifi haadhasaanii Aadde Wasanee Birruurraa dhalatan. Abbaansaanii osoo isaan daa’imummaan jiranii Xaaliyaaniidhaan waan ajjeefamaniif akkoosaanii biratti guddatan.
Ijoolummaasaaniitti fedhii maatiifi firootasaaniitiin kan heerumsifaman ta’us bultoonsaanii milkaa’uu dhabnaan bakka dhalootaasaanii dhiisanii Finfinnee dhufan. Finfinneettis bultoo ijaarratanii jireenya gaarii jiraachuu eegalan. Osoo haala kanaan jiraataa jiranii taateen jireenyasaanii gara tola ooltummaatti geessu isaan mudate. Bara 1972 ayyaana ‘Gishan Maariyaamii’ waggaa kabajuuf gara Walloo gaafa deeman namoota ongeedhaan miidhaman hedduu argan.
Harkasaaniitti daabboo muraasaafi ‘xabala’ liitiri shan qabatanii turan osoo miidhamtootaaf qoodaa jiranii haadha daa’ima harmasheerra cibsitee ciistu argan. Waan rafte se’anii ittisiqanii kaasuuf gaafa yaalan haatii duuteetti. Daa’ima irraa fuudhanii, daa’ima biraa dabalatanii lamaansaanii fudhatanii deebi’uun akka ijoolleesaaniitti guddisuu eegalan. Ofii daa’ima kan hingodhanne Doktar Abbabach haala kanaan daa’immaan guddisa hinqabne bakka addaddaati walitti qabuun guddisuu ittifufan. Hojiisaanii kana abbaan warraasaaniifi olloonnisaani kan balaaleeffatan yoo ta’u, kanarraa kan ka’es bultoonsaanii diigame.
Maatiinsaaniis yaada kana fudhachuufi hindandeenye. Yeroo kana mana xiqqoo kireeffachuun siree dhoqqeedhaan ijaaruun daa’imman guddisuu ittuma fufan.
Daa’immansaanii guddisuuf jecha gidiraa hedduu arganiiru. Faaya miidhaginaa qaban gurguraniiru, buddeenaafi daabboo tolchanii gurguraniiru. Doktar Abbabach yeroo muraasaaf daa’imman walitti qaban manumasaanii keessatti erga guddisaa turanii booda, dhaabbata gargaarsa daa’immanii ‘Biruh Tasfaa’ jedhamu mootummaadhaan beekamtii qabuufi gargaarsa biyya alaatiin deggaramu hundeessan.
Dhaabbati haala kanaan hundaa’e daa’imman kumaatamaan lakkaa’aman gargaaruu eegale. Kanneen haadhaafi abbaa hinqabneefi sababoota garagaraatiin rakkatan hedduu tajaajila bultii, nyaataa, barnootaafi wal’aansasaanii danda’anii barsiisaniiru.
Kanneen dhaabbatichatti baratanii xumuran hojii akka argataniif ogummaa garagaraatiin ni leenjisu.
Leenjiin dhaabbatichaan kennamuus wayyaa hodhuu, hojii rifeensaa, wayyaa dhahuu, leemmana hojjechuu, ogummaa suura kaasuu, hojii makaanikaalaa, elektiriikiifi kkfdha. Dhaabbatichi gaafa hojii kanneen hojjetu namoota hedduuf ammo carraa hojii baneera. Daa’imman dhaabbatichatti baratanii ba’aan ogummaa garagaraatiin maatiifi biyyasaanii tajaajilaniiru.Daa’imman maatiisaanii hinbeekne gaafa waggaa 18 guutan akkasaan maatiisaanii beekaniif yaalii hundas ni taasisa.
Kana qofa miti manneen barnootaa, wiirtuuwwan fayyaa, misoomawwan bishaaniifi hojiilee hawaasummaa hedduu hojjetaniiru. Shamarran barnootasaanii akka barataniifi hojiis qabatan ni barsiisu, ni leenjisu.
Hojiinsaanii magaalaa Finfinnee qofatti daangeeffame turees gara Shawaa Lixaa, Gudarittillee imaleera.
Achittis wiirtuu guddisa daa’immanii banuun daa’immaniifi shamarran hedduun akka fayyadaman taasisaniiru. Isaan qofa osoo hintaane hawaasni naannawaallee fayyadamuu danda’eera.
Walumaagalatti namoonni miliyoona lamatti siqan kallattiinis ta’u alkallattiitiin tajaajila dhaabbannisaanii kennurraa fayyadamaniiru.
Daa’imman Doktar Abbabach guddisan ‘Iddaayyee’fi ‘Immaammaa’ jedhuun kan isaan waaman yoo ta’u, jaalala haadhumaa osoo hinqusatiin yeroosaanii guutuu kennanii wajjin dabarsaa turan.
Hojiisaanii kana kan argan namoonni kaan ammoo ‘Maazar Tireezaa Afrkaa’ jechuun waamuun. Kanarraa ka’uun doktireetiin kabajaa kennameeraaf.
Bulchiinsi Magaalaa Finfinnees dhiheenya kana hospitaala daa’immanii dubartootaa qarshii miliyoona 700n ijaarsise maqaasaaniitiin moggaaseera.Kutaan qophii Gaazexaa Bariisaas gadda guddaa boqochuu haadha miliyoonotaa Doktar Abbabach Goobanaatiin itti dhaga’ame ibsaa; dhibantoota, firootaafi ummata Itoophiyaa hundaaf jajjabina hawwa.
ለዚህ ጥፋት አንዳንድ የሀይማኖት መሪወች ከተጠያቂነት የሚያመልጡ አይመስለኝም…